JW61-drano fiaramanidina fanenoman-damba - China Tianyi Group
Red Flag rano karazana fiaramanidina vaovao fanenoman-damba, Saika mahasoa kokoa milina fanenomana, izay manokana ho an'ny mpampiasa avo-end. Fanalefahana mihetsika tsara, mafy orina sy manamafy orina mandanjalanja zana-tsipìka voalambolambo daroka rafitra, ETU, elo, 4 ao amin'ny 1 avo-tsaina kilasy fanaraha-maso sy ny olona-milina interface tsara mikasika efijery. Main endri-javatra: 1. Avo Hentitra loatra rafitra rafitra, hafainganam-pandeha avo & mitohy ny manenona mavesatra sy avo hakitroky lamba; 2. Ny ventin-counterweight daroka-mandanjalanja ny lavaka, fanohanana bebe kokoa, tsara kokoa ho haingam-pandeha fanenomana; 3. S ...
Red Flag rano karazana fiaramanidina vaovao fanenoman-damba, Saika mahasoa kokoa milina fanenomana, izay manokana ho an'ny mpampiasa avo-end. Fanalefahana mihetsika tsara, mafy orina sy manamafy orina mandanjalanja zana-tsipìka voalambolambo daroka rafitra, ETU, elo, 4 ao amin'ny 1 avo-tsaina kilasy fanaraha-maso sy ny olona-milina interface tsara mikasika efijery.
1. High Hentitra loatra rafitra rafitra, hafainganam-pandeha avo & mitohy ny manenona mavesatra sy avo hakitroky lamba;
2. Ny ventin-counterweight daroka-mandanjalanja ny lavaka, fanohanana bebe kokoa, tsara kokoa ho haingam-pandeha fanenomana;
3. Mpitovo na roa tsy voatery paompy fametrahana, fitaovana elektronika amin'ny fanaraha-maso ny rafitra manan-tsaina, mahatsapa loko roa na efatra maimaim-poana weft mifidy loko;
4. Electronic Aoka-eny (elo) sy ny elektronika maka-maso (ETU) dia afaka mahatsapa miova weft-hakitroky fanenomana;
5. haingam-pandeha rafitra paompy rano, azo antoka kokoa haingam-pandeha weft fampidirana;
6. Crank, Cam, dobby, jacquard mandatsaka tsy voatery;
7. miankina fikarohana sy ny fampandrosoana rafitra fanaraha-maso ny manan-tsaina, 4 ao amin'ny 1, ny milina rehetra masontsivana dia afaka ny ho mety sy sariaka niasa an-dralehilahy-milina mikasika lamba fanakonana,
8. Reed toerana (cm): 170.190.210.250.280.340.360.
Previous: JW81 rano fiaramanidina haraka
Next: 3 JW51-drano fiaramanidina haraka
408 Water Jet haraka
851 Rano Jet fanenoman-damba
Cotton Fabric fanaovana Textile Machines
Double Tara Water Jet haraka
Double Nozzle Water Jet fanenoman-damba
Heavy Adidy Water Jet Looms
Heavy Water Jet fanenoman-damba
Avo Ary Down Double Tara
High Speed ​​Heavy Water Jet haraka
Japana Textile Machine
Jw51 Water Jet haraka
Jw61 Water Jet haraka
Jw81 Water Jet haraka
New Water Jet fanenoman-damba For Sale
Niupai Cam fandatsahana
Niupai Dobby mandatsa-
Mpanao faharoa ny Hand Textile Machine
Single Nozzle Water Jet fanenoman-damba
Top rano Jet fanenoman-damba
Toyota Textile milina
Tsudakoma Water Jet fanenoman-damba
nampiasaina Tsudakoma Water Jet Looms
nampiasaina Water Jet fanenoman-damba
Water Jet Jacquard fanenoman-damba
Water Jet fanenoman-damba Textile Machines
Water Jet fanenoman-damba Weaving Machine
rano Jet Looms
Water Jet Power fanenoman-damba
rano Jet Textile
Water Jet Textile fanenoman-damba
Fahombiazana Textile International Exhibition ...